Health & Living Archives - Page 10 of 267 - Media Nepal
यो आश्चर्यजनक प्राकृतिक जुसले यसरी केहि दिनमै फाल्छ किड्नीको पत्थरी
January 18, 2018	Comments Off on यो आश्चर्यजनक प्राकृतिक जुसले यसरी केहि दिनमै फाल्छ किड्नीको पत्थरी
धेरैजसो मानिसको जीवनमा पत्थर सम्बन्धि समस्या हुने गर्दछ । आज हामी तपाइँलाई मृगौलाको पत्थरबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिन्छौं । मृगौलाको पत्थर भनेको के हो ? पिशाबमा काम नलाग्ने वस्तुहरु हुन्छन् । थोरै पिशाबमा धेरै काम नलाग्ने वस्तुहरु जम्मा भएमा यसले ठोस पदार्थ ( क्रिस्टल ) को निर्माण गर्ने गर्दछ । यदि काम नलाग्ने वस्तुहरु पिशाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न नसकेमा अरु …
जाडोमा चिसोबाट बच्चाहरुलाई बचाउने उपायहरु यस प्रकार छन्
January 18, 2018	Comments Off on जाडोमा चिसोबाट बच्चाहरुलाई बचाउने उपायहरु यस प्रकार छन्
जाडोको समयमा बच्चाहरुलाई विभिन्न प्रकारका रोगहरु लाग्ने गर्छ । यस समयमा बच्चालाई छिट्टै चिसो लाग्ने भएकाले उनीहरु बिरामी पर्ने गर्छन् । बच्चाहरुलाई चिसोबाट बचाउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हुने गर्छ । बच्चालाई चिसोबाट बचाउनको लागी बच्चाको आमा पनि चिसोबाट बच्नु निकै जरुरी हुन्छ । यस समयमा ब्याक्टेरिया र भाइरसले सजिलैसँग संक्रमण गर्न सक्ने भएकाले पनि बच्चाको ख्याल गर्नु निक जरुरी हुन्छ …
सावधान! नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा, यसरी ज्यानै जानसक्छ
January 18, 2018	Comments Off on सावधान! नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा, यसरी ज्यानै जानसक्छ
मानिसको प्राय सबैको एउटा एउटा अधत हुन्छ । कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती या पाका उमेरका मानिस नै नङ टोकीरहेका हुन्छन् । नङ टोक्ने बानी खराब हो । त्यसैले अभिभावकहरुले बालबालिकालाई नङ टोक्नु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ । नङ टोक्ने बानीले विभिन्न प्रकारका संक्रमण फैलिने डर हुन्छ । शरीरका विभिन्न …
चिसो भयो भन्दै मदिरा पिउनुहुन्छ ?, ज्यानै जाला है
January 18, 2018	Comments Off on चिसो भयो भन्दै मदिरा पिउनुहुन्छ ?, ज्यानै जाला है
‘आज मौसमले च्यालेन्ज गर्यो’ मदिराप्रेमीमाझ प्रचलित यो भनाइले चिसो बढ्दा न्यानोका लागि मदिरा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ ।तर, चिसो मौसममा बढी मदिरा सेवन गर्दा ज्यानै जाने गरेको छ । चिकित्सकको अनुभवमा विपन्न समुदायमा चिसो हटाउने नाममा बढी मदिरा सेवन गरेर बाहिर सुत्दा धेरैको ज्यान गएको छ ।मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले चिसोमा मदिराले तत्कालका लागि न्यानो गराए पनि शरीरभित्रको …
अनुहारमा घ्यू-कुमारी लगाउनुस् अनि १५ मिनेटपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ परिणाम
January 17, 2018	Comments Off on अनुहारमा घ्यू-कुमारी लगाउनुस् अनि १५ मिनेटपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ परिणाम
औषधिय गुण हुने भएकोले घ्युकुमारीको प्रयोग विभिन्न सौन्दर्र्य उत्पादनमा गरिन्छ । मानिसहरु आफ्नो छालालाई नरम र चम्किलो बनाउनको लागि महङ्गा सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसबाट धेरै पैसा खर्च हुने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो छालालाई सुन्दर तथा आर्कषक बनाउने कोशिश तपाइँले प्राकृतिक उपायबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि तपाइँलाई मात्र एउटा सामाग्री घ्युकुमारीको आवश्यकता पर्दछ । यसको प्रयोगले …
यस्ता हुन्छन् फोक्सोको क्यान्सरका ६ लक्षण, जानी राखौं !
January 17, 2018	Comments Off on यस्ता हुन्छन् फोक्सोको क्यान्सरका ६ लक्षण, जानी राखौं !
फोक्सोको क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणमा सजिलै लक्षणहरु देखापर्दैनन् । यसै कारणले गर्दा यो रोग विकसित भईसकेपछि अनुमानित ४० % मानिसहरुले मात्र पत्ता लगाउन सकेका छन् । आज हामी तपाइँलाई फोक्सोको क्यान्सरको ६ लक्षणहरुको बारेमा जानकारी दिन्छौं । जुन निम्नानुसार छन् । लामो समयसम्म खोकी लाग्नु चिसोले अथवा श्वासप्रश्वासको संक्रमणले गर्दा खोकी लागेको हो भने, १ वा २ हप्ताभित्रमा निको हुने गर्दछ …
कपाल झरेर टक्ला भएको भागमा तत्काल रौँ उमार्ने र छिटो बढाउने घरेलु उपाय [सामग्री र बिधि सहित ]
January 17, 2018	Comments Off on कपाल झरेर टक्ला भएको भागमा तत्काल रौँ उमार्ने र छिटो बढाउने घरेलु उपाय [सामग्री र बिधि सहित ]
प्रायजसो टाउकोमा कपाल नहुने अवस्था बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित छ । समयभन्दा अगाडि नै टाउकोमा कपाल नहुनुको धेरै कारणहरु छन् । जस्तै; तनाब , तौल घट्नु , विभिन्न प्रकारका खाद्यपदार्थ आदि । कपाल नहुनु महिला र पूरुष दुबैको निम्ति ठूलो समस्या हो । धेरै पटक कपाल गुमाउने समस्याले आत्मविश्वास घटाउनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।यस समस्यालाई हटाउनको लागि बजारमा धेरै किसीमका वस्तुहरु पाईन्छन् …
मुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? अब यसो गर्नुहोस एकछिनमै गायब हुन्छ
January 17, 2018	Comments Off on मुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? अब यसो गर्नुहोस एकछिनमै गायब हुन्छ
के तपाईको मुखमा साना-साना बिबिरा, फोका-फोकी आएर निकै सताएको छ ? मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना-कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएकाे छ ? यस्ता घाउ खटिराकाे समस्या बढेर जटिल समस्या पनि अाउन सक्छ । घाऊ ठूलो र गहिरो भएमा खान बोल्नै नहुने किसिमको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा लगातार दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, घाँटीको ग्रन्थि …
मात्र १ पटक गेर्नुहोस् यो थेरापी, ६० वर्षमा पनि देखिनु हुनेछ जवान !
January 17, 2018	Comments Off on मात्र १ पटक गेर्नुहोस् यो थेरापी, ६० वर्षमा पनि देखिनु हुनेछ जवान !
बढ्दो उमेरका साथै छाला भित्रको बोसोको मात्रा घट्दै जान्छ। घामको किरण र प्रदुषणले गर्दा हुने नोक्सानका कारण रेखा वा चाउरी पर्नुका साथै छालाको चमकमा पनि कमी आउछ। जसको कारण बुढो र थाकेको जस्तो देखिन्छ। पीआरपी (platate Rich Plasma) थेरापी मार्फत गुमाएको सौन्दर्य, आवाज र छालाको प्राकृतिक चमक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।अपोलो अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी एवम अन्ड्रोलोजिस्ट अनुप धीरलेका अनुसार पिआरपी …
January 17, 2018	Comments Off on यस्तो अवस्थामा भुलेर पनि खानु हुदैन बन्दागोभी, नत्र ज्यान जान पनि सक्छ
बन्दागोभी भन्ने बित्तिकै कतिपय सम्भ्रान्तवर्गीय मानिसहरुले निधार खुम्च्याउँछन् । यो सस्तो तरकारी गरीबले खाने तरकारी हो भन्ने पनि बेर लगाउँदैनन् ।तर बन्दा गोभी धन नहुनेले मात्र खाने तरकारी होइन । यो त तन स्वस्थ राख्न चाहने जो कोहीले खानैपर्ने तरकारी हो । बन्दागोभीमा यस्तो तत्व हुन्छ जसले क्यान्सरको रोकथाममा सहयोग गर्छ । बन्दामा डिनडली मिथेन, सिनिगि्रन, ल्युपेल, सल्फोरेन, इन्डोल थ्री …
Page 10 of 267« First...«89101112	»	203040...Last »